Biyyii kaanaadaa yeroo jalqabaatiif guyyaan dhugaa fi Araaraa akka kabajamu murteesiteetti.
Kanaadaan Guyyaan kun akka kabajamu kan murtaa’e seenaa biyyatti keessatti bara 1831 hanga 1998 namoottan ganamaa kaasee lafa biyya Sanaa irra turan warra Hindootaa sabaa biraatiin wajjin waliin makuudhaaf jedhaamee ijoolleen isaanii manoottan baruumsaa bakka jireenyaa keessatti akka dirqiidhaan baratan taasifamee, ijollewwan hedduun miidhaamuu isaanii yaadachuudhaaf.
Bara sana keessatti ijollewwan 150,000 mannoottan baruumsaa waldaalee Amantaa kiristaanaa adda addaatiin geggesaman akka seenan taasifamee , ijoolewwan hedduun hiraarsii qaama fi hokkorri saalaa akkasumas , dhabiinsa nyaata gaahaa fi ilaachaa gad aantumaaf saaxilamanii turan. ijoollewan 4000 ol ta’an imoo akka du’an amanama. Guyyaan yaadannoo kun wareen sababa sanaan du’an fi warren rakkinichaa irraa hafan yaadachuudhaaf jedhameera.
Muumeen ministeeraa Kanaadaa Justiin Turuudoo dhimaa kan ilaalchisaanii haasaa guyyaa kaleessaa taasisaniin, waa’ee ijoolewan mana isaanii,hawaasaa isaanii, Afaan isaanii, aadaa isaanii, irraa dirqiidhaan butamanii,
waa’ee eenyummaadhaaf eessumma haadhaaf abbaa isaanii ittu hinbarin hafan calaqisiisuu qofaa ittu hin taane, guyyaa ara’aa fi egerii guyyaa akka lammii kaanaadaattii seenaa biyyaa keenyaa ittiin calaqisiisuu qabnuudha jedhaniiru.